नजिक न्युज | अबको क्रान्ति र युवा स्वरोजगार !
लामो समय सम्म अस्थिर राजनीति र परनिर्भर अर्थतन्त्र नै मुख्य कारक तत्व मानिन्छ । आजको देशको बढ्दो बेरोजगार र युवा शक्ती बिदेश पलायन । खाडीको चर्को घाम र विदेशीको गुलाम सहेर पनि रेमिटेन्स (बिप्रेषण)ले म मेरो देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन्छु,अनि बचेको पैसाले दैनिक गुजारा चलाउन्छु ।
त्यहाबाट बचेको पैसाले छोराछोरीलाई स्कुल पढाउन्छु, बुढा बा को औषधि उपचार गर्छु, आमाको फाटेको चोली र चुहिने घरको छानो टाल्छु यस्ता सुन्दर सपनाको महल बाउन सक्षम लाखौं क्रमवीर युवा शक्तिलाई स्वदेमै युवा स्वरोजगारको ज्ञारन्टी गरिएको भए दैनिक १५ सयका दरले युवा शक्ती श्रम बेच्न विदेश पलायन हुने दिन आउने थिएन ।
दैनिक रुपमा २ देखि ३ का दरले बाकसमा प्याक भएका लास त्रिभुवन विमान स्थलमा ओर्लिने थिएन अनि गाउँको पाखो जमिन बाजै रहने थिएन । अब देशलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र विकासको गतिमा अगाडी बढाउने हो भने कृषिलाइ नै मुख्य आयआर्जनको स्रोत मानि जल्दो युवा शक्तिलाई कृषि कार्यमा संलग्न गराउन आवश्यक छ ।
यसका लागि बित्तीय पहुँच, कृषि बजारिकरण र आधुनिकीकरण गर्ने हो भने देशलाई आर्थिक रूपमा उकालो लागाउन कुनै दुबिधा छैन । हाम्रो देशमा समस्याई–समस्या मात्रै हैन प्रचुर मात्रामा सम्भावना पनि छ्न । यहि सम्भावनाको खोजी र युवा स्वरोगारलाई अहिले सरकारले मुख्य एजेन्डामा राखेको छ ।
अब यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु आजको आवस्यकता पनि हो । विश्वका विकसित देशको इतिहास लाई हेर्ने हो भने संसारका सबै मुलुकहरू जस्तै चीन, जापान बेलायत जस्ता देशहरुको मुख्य आधार नै कृषिलाई दिएको देख्न सकिन्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको आधार र सारलाई कृषि क्रान्तिबाट मात्रै भएको देखिन्छ । उदाहरणको लागि बेलायतको कृषि क्रान्तिबाट मात्रै औद्योगिक कच्चा पदार्थको विकास गरि औद्योगिककरणमा प्रवेश गरेको भेटिन्छ । हाम्रो देश भौगोलिक हिसाबले मुलुक सानो भएता पनि विविध प्रकारको हावापानी भएको हुनाले सम्भावनाका हिसाबले कृषिमा नेपाल धनी देश मानिन्छ ।
उचित किसिमको हावापानी भएको हिसाबले यहाँ कृषि व्यवसायको प्रचुर सम्भावना छ । तराई फाटमा जस्तै धान, मकै, उखु र केरा खेती फस्टाउन सक्छ तराई भुमी खेतीयोग्य हावापानी भएको हुनाले प्रसस्त मुनाफा गर्ने प्रकारका अन्नवाली लगाउन सकिन्छ । सिचाइलाई कम लागतमा खेतका गरागरामा पुर्याउन सकिन्छ ।
पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा ठुला तथा सम्भावना बोकेका कारण कृषिलाई विद्युतीय माध्यमबाट खेतीलाई सन्चित गरि १७ प्रतिशत समथर भुमिमा अत्याधुनिक कृषि प्रविधि सहितको इजरायलको जस्तो सामुहिक खेतीको अवधारणा बनाउने हो भने कृषि क्षेत्रको सम्भावनालाई झनै मजबुत बनाउन सकिन्छ । यसै गरि हिमाली क्षेत्रमा पनि बहुमुल्य जडिबुटी र मौसमी फलफूल उत्पादनले देशको आर्थिक स्तर सहजै माथी उस्कनेमा कुनै दुबिधा रहदैन ।
मुलुकको गरिबी निवारण,आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रलाई उपलब्धिमुलक बनाउन निम्न उपाए अपनाउन अनिर्वाय छ ।
१) एक परिवार एक किसानको योजना लागू गर्ने ।
२) खेती जमिन र जनावरको बिमाको ब्यवस्था गर्ने ।
३) किसानलाई वास्तविक किसान र चिनारीकोलागि परिचयपत्र र सहुलियत ऋणको उपलब्ध गराउने ।
४) श्रम नगर्ने मेहनत नगरी श्रमिकहरुको श्रम माथी लुट मच्चाउने विचौलियाहरुको अन्त्य गरिनु पर्छ ।
५) हावापानी सुहाउँदो कृषि व्यवसायको थालनी गर्नु पर्ने ।
(लेखक : इन्द्र बोहरा,अनेरास्वयू जिल्ला कमिटी सदस्य हुन)
बुधबार १०, असार २०७७ ०९:३३ मा प्रकाशित
सरकारका माथिल्लो ओहोदामा बसेका ब्यक्तिहरुले नै छुवाछुत गर्छन भने हामी अन्य समुदायबाट के अपेक्षा गर्ने ?
लकडाउन डायरी : मैले देखेका सपना र सम्भावना
राजनीति र कर्मचारीतन्त्रसँग जोडीएको बाजुराको विकास